Wasarada Caafimadka Awdal Oo Bogaadisay Digreeto-da Maamul Ee Wasiir Gaafaadi “Dawladnimo” AwdalMedia Awdal Media Wasarada Caafimadka Awdal Oo Bogaadisay Digreeto-da Maamul Ee Wasiir Gaafaadi “Dawladnimo”
Wasarada Caafimadka Awdal Oo Bogaadisay Digreeto-da Maamul Ee Wasiir Gaafaadi “Dawladnimo”
Digreetadii ka soo baxday Wasiirka Wasarada Hormarinta Caafimaadka Somaliland Mudane Xasan Maxamed Cali” Gaafaadi” ee uu Cinwaankeedu ahaa—Cadayn Jaranjarada Maamulka ee W/H/Caafimaadka Heer Gobol—waxa ay ahayd aan cidna duulaan ku hayn, cidna aan dalacsiin, lana micno ah “dawladnimo” waxana ay ahayd mid dan u ah sedex (3) dhinac oo isugu jira adeegayaasha iyo ka faaiidaytayaasha shaqada ay hayso Wasaarada ugu balaadhan Wasaaradaha dalka ee Wasaarada Caafimaadka.
Qaybta koowaad ee digreetadan Wasiir Gaafaadi ay faa’iidada u tahay waa madaxda caafimaadka ee heer gobol iyo heer degmo, sababta oo ah waxa ay meesha ka saaraysaa hufnaan-la’aantii jirtay ee dhinaca maamulka ahayd, qorshayaashii is-babar-socday ee masuul walba uu iskii shaqadiisa ugu jaan-goyn jiray, iyo isku-riix-riixii dhinaca masuuliyada ahaa ee jiray. Tan badalkeedana, waxa ay horseedaysaa inay mideeyaan qorshahooda waxqabadka, waxa ay meel-saaraysaa masuuliyadii, waxay jeexaysaa jid isla-xisaabtan oo dhereran min-heer tuulo, degmo ilaa gobol. Tan ugu muhiimsana waxa ay tahay inay si cad u qeexayso hanaanka wadaaga xogta iyo warbixinada—who reports to who—oo ay maanta cadahay jaranjarti maamul ee loo marayay.
Qaybta labaad ee ka faa’iidaysa digreetan ayaa ah masuuliyiinta heer Qaran ee Wasaarada Caafimaadka. Waxa ay digreetadu u iftiiminaysaa sida loo kala leeyahay hawlaha balaadhan ee ay maamul-daajinta ku sameeyeen ee yaala gobol kasta iyo inta uu maamulo. Waxa ay ka soo afjaraysaa shirarkii xafiisyadooda Hargaysa mashquulin jiray ee ay la yeelan jireen madaxda ay magacaabeen ee isla gobol iyo inta uu maamulo ka socotay. Waxa ay banaan-yaal ay cida masuuliyada lehi cadahay ka dhigaysaa nidaamyadii xisaabta & xisaabaadka, qorshaha & qorshaynta, dhismayaasha & qalabaynta, shaqada & shaqaalaysiinta iyo bixinta adeegyada caafimaadka ee min heer xaafad, degaan, tuulo, degmo ilaa min heer gobol. Tan ugu muhiimsana waxa ay tahay inay heli doonaan xog midaysan oo leh meel loo raaco iyo cid ka muul ah.
Bulshada loo adeegayo waa qaybta sedexaad ee Digreetan ay faa’iido u tahay. Waxa ay u tilmaami doontaa jidka ay u marayaan adeegyada loo qabanayo, talooyinka ay wadaan iyo cabashooyinka ay qabaan. Waxa ay u tilmaami doontaa cida masuuliyada leh ee taladu ka go’do ee ay talo & tusaalaba la hor fadhiisanayaan. Waxa ay heli doonaan adeegayaal la isla yaqaan oo ilaa heer qaran dareenkooga gaadhsiin kara. Tan ugu muhiim sana waxa ay tahay inay u cadaan doonto cida lala xisaabtamayo ee guul iyo guul-daraba qaadan doonta masuuliyada shaqada ee loo hayo.
Si kastaba ha ahaatee Digreetadan ayaa ah mid muujinasa dawladnimo, nidaam iyo kala dambayn, waxa ay tahay mid muujinaysa tayaynta shaqada ay Wasaarada Caafimaadku u hayso bulshada, tayayntaas oo loo marayo nidaam dawladeed iyo kala dambayn. Waxa ay midayn doontaa qorshayaashii waxqabadka iyo awdoodii baahsanayd ee wasarda, waxana ay horseedi doontaa hormar la taaban karo, kala dambayn, nidaam iyo isla-xisaabtan banaan yaal ah oo ay cadahahay cida iska leh masuuliyada.
Ugu dambayna, Digreetadan Wasiir Xasan Maxamed Cali “Gaafaadhi” ayaa ah mid ka marag kacaysa dawlad-yaqaannimada Wasiir Gaafaadhi, Hogaanka iyo Hogaaminta Wasiir Gaafaadhi, waxana ay ka marag kacaysa sida ay Wasiirka uga go’an tahay dhabo u xaadhida haykal-dawladeed ee ku qotoma tiirar ku dhisan kala dambayn, nidaam, is tix-galin, hufnaan iyo dawladnimo qaangaadhay.
“Wasaaradaha Dalka Waxa La Gud-boon Inay Digreetadan Wasiir Gaafaadhi Cashar Ka Bartaan”
Suldaan Xasan Oo U Gabyay Madaxweyne Biixi, kuna Dhawaaqay Shirka Beeshiisa Sacad-muuse.
Qaramada Midoobay Oo ka Digtay Abaaraha ku Dhuftay Somaliya